Ptengine: Sarintany hafanana, fampielezan-kevitra, fanaraha-maso ny fiovam-po sy ny analytics | Martech Zone
Alahady, Desambra 27, 2015 Asabotsy Jolay 8, 2017 Douglas Karr
Raha maro Analytics Ireo sehatra eny an-tsena dia tavela amin'ny teknolojia efa mihoatra ny roapolo taona, ny teknolojia vaovao dia mifantoka kokoa amin'ny fitondran-tenan'ny mpampiasa sy ny famakafakana ny fandefasana fivoahana. Heatmaps dia fitaovana tonga lafatra ahitanao ny fifandraisan'ny mpampiasa mandritra ny fotoana maharitra miaraka amin'ny lamina, ny fivezivezena ary ny antso-to-hetsika. ptengine manolotra fanangonana fitaovana namboarina manokana ho an'ireo tanjona ireo.
Fanadihadiana momba ny sarintany hafanana - Ampitahao ny heatmaps eo amin'ny pejy, fe-potoana ary fizarana tsy manam-petra mba hahitana sary an-tsaina ny fihetsiky ny mpitsidika isan-karazany.
Tsindrio Heatmap - Alao sary an-tsaina ireo angona tsindrio miaraka amin'ny sary an-tsary momba ny thermographic, manome fahatakarana haingana sy mora momba ny fitondran-tenan'ny mpitsidika.
Heatmap - Ny angon-drakitra voaangona dia manaporofo ny toerana ifantohan'ny mpitsidika bebe kokoa, manampy amin'ny famaritana ny fametrahana dokambarotra tsara indrindra, manome fampahalalana lehibe rehefa mamolavola sy manavao ny pejy fandraisana, mampihena ny fialana amin'ny sarety fiantsenana, mampitombo ny fiovan'ny endrika an-tserasera ary maminavina ny fomba hampiasan'ny mpitsidika ny tranonkalanao amin'ny ho avy .
Fanaraha-maso Multi-Device - manara-maso sy manadihady angona avy amin'ny fitaovana rehetra ary manohana ireo tranokala namboarina miaraka amina endrika mamaly.
Fanadihadiana pejy - fitaovana fandinihana mahery vaika hanangonana ny isan'ny tsindry azo avy amin'ny singa mifandray sy tsy mifandray. Na inona na inona ny singa dia mahazoa fahitana ny isan'ny tsindry marina amin'ny bokotrao, ny sary, ny horonan-tsary, ny milatsaka ary ny maro hafa.
Sarintany ahatratra ny horonana - rakipeo misintona sy heatmap hisarihana mba hanomezana ny tena isan-jaton'ny mpitsidika mihodina amin'ny faritra sasany amin'ny pejinao. Makà fahitana feno momba ny antony andehanan'ny mpitsidika anao rehefa tonga amin'ny tranokalanao izy ireo.
Group Analytics - Amin'ny alàlan'ny Head Match, End Match, Exact Match, ary Regex, Ptengine dia manolotra fomba samihafa handinihana ireo pejy izay misy lafiny itovizany, toy ny kiraro misy loko isan-karazany, fiara misy maodely isan-karazany, lahatsoratra nosoratan'ny mpanoratra samy hafa, pejy fipetrahana misy URL samy hafa. Mitsitsia fotoana lany amin'ny fanitsiana ny URL fampielezan-kevitra efa misy.
fampielezan-kevitra - mamorona URL fampielezan-kevitra (na mifanentana amin'ireo efa misy), ary mamakafaka ny fifamoivoizana amin'ny anarana, loharano, salantsalany, teny ary atiny.
Fantsona fiovam-po - Ianaro ny toerana sy ny antony ajanon'ny mpitsidika ny fitsidihany, ary ny fomba fivezivezeny manerana ny tranonkalanao. Ampiharo ny heatmap an'i Ptengine Analytics ao amin'ny Fantsonao fiovam-po ary avadika ho mpanjifa ny mpitsidika.
Topimaso ny mpitsidika amin'ny fotoana tena izy - manangona angon-drakitra momba ny fifamoivoizana ampiarahan'ny mpampiasa, ahafahanao manitsy ny varotra haingana sy mahomby.
Analytics geografika - Amin'ny fotoana tena izy, atoroy ny toerana misy azy ireo mpampiasa. Antsipirian'ny mpitsidika
Antsipirian'ny mpitsidika - Araho maso ny angon-drakitra manan-danja rehetra ananan'ny mpitsidika miaraka, toy ny hetsika, fitetezana atiny, rafi-pandidiana, mpitety tranonkala, ary pejy fanovozana.
Tags: sari-tany hafananaheatmap fifantohanakitiho ny sarintany hafananatsindrio heatmapfanadihadiana momba ny sarintany hafananasarintanin'ny hafananaheatmapptengine